China Yakakwira yepamusoro hwaro hwemvura izere yekufukidza hwaro yakavanzika chitambi isina mvura yekuzadza hwaro mvura fekitori nevatengesi Iris Runako
Yakakwira mhando hwaro hwemvura izere yekuvhara nheyo yakavanzika chitaridzi isina mvura yekugadzira hwaro mvura
Nheyo isingaremi ine kufukidzwa kwepamusoro uye kupera kwematte. Kuvhara kwakazara kunoshandawo kudzora kupenya uye nekukwirisa bvudzi rako zuva rese. Asi haimire ipapo: iyi yakasarudzika nheyo yakakodzera kune yakajairwa, oiri, musanganiswa, uye inonzwisisika mhando dzeganda.
Iyo furuji hwaro ine yakanaka uye yakapfava dhizaini, yakanaka extensibility, nyore kusundira kure, usabatike, uye inopa yakazara yakazara kufukidza. Iyo inogona kunyatso kufukidza hurema hweganda senge acne mavanga, mavara erima kumeso, rima madenderedzwa pasi pemeso, isina kuenzana ganda toni uye yakawedzera pores. Inoita kuti ganda rionekwe uye riite zvakanaka, richiita kuti ganda riite serakasikwa.
Iyo yemvura hwaro ine yekunyorovera uye yekuvhara-mvura basa. Inosanganisira kuchenesa uye kunyorova uye kugadzirisa zvigadzirwa zvekuchengetedza ganda, kuvhara mitsara yakanaka uye kuunyana, uye kuita kuti ganda rako rioneke rakakwana.
Iyo inogara kwenguva refu, isina mvura, uye sweat-proof fomula inokutendera iwe kuti uchengetedze-inogara-refu runako zuva rese. Kureruka kwenheyo nheyo kunogona kuwedzera kubwinya, kujekesa ganda toni uye kuita ganda silky kutsetseka. Inotakurika dhizaini, novices vanogona kuishandisa zviri nyore, inokodzera vakadzi vane akasiyana ganda toni.
Item Zita Nheyo
2. Vegan / Paraben yemahara / mafuta emahara
4. Smooth, yakazara kufukidza
5. Kune ese marudzi eganda
2.Q: Une mavara mangani iwe wenheyo?
A: Huru hwaro hwakazara isu tine makumi matatu mavara iwe aunosarudza, zvakare isu tinokwanisa kugadzirisa ako wega mavara.
Pashure: Wholesale hwaro gadziriso tsika vegan hwaro gadzira rako wega logo organic hwaro hwakavanzika chitaridzi
Zvadaro: OEM kumeso fosheni yekuzora mvura yakawanda tsika yakasarudzika yakavanzika vheji vegan hwaro hwezvizoro
Yakazara yekuvhara nheyo yakavanzika chitambi
yemhando yepamusoro hwaro hwemvura yakazara yakazara
isina mvura hwaro
isina mvura hwaro makeup
isina mvura yekugadzira hwaro
vegan eco makeup remover oiri hydrating yakavanzika ...
vegan highlighter yakasarudzika chitaridzi ekugadzira tsika h ...
highlighter makeup mutengesi cosmetic hapana logo yakakwira ...
Custom hwaro private chitaridzi matte foundatio ...
OEM kumeso nheyo yekuzora mvura Wholesale cus ...
Wholesale nheyo makeke tsika vegan founda ...